डेंगुका बिरामीले किन खानु हुँदैन पेन किलर औषधि? - चौतारीपोष्ट अनलाईन
डेंगुका बिरामीले किन खानु हुँदैन पेन किलर औषधि?
डेंगुलाई घातक हुनबाट यसरी रोकौं
‘मलाई डेंगुको शंका लागिरहेको थियो। ज्वरोका साथसाथै आँखाको गेडी अति दुख्ने, टाउको दुख्ने, शरीर अति दुख्ने, घाँटी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने गरेकोले डाक्टरलाई डेंगुको रगत जाँच गर्न अनुरोध गरेको थिएँ, तर काठमाडौँमा डेंगु नै छैन, त्यसैले जाँच आवश्यक छैन भनेर एन्टिबायोटिक र फ्लेक्सोन दिएर पठाउनुभयो। तर यहाँ जाँच गरेको डेंगु पोजिटिभ देखियो,’ एक महिला आफ्ना छोराको समस्याबारे मसँग भन्दै थिइन्। यति भन्दैगर्दा उनी आत्तिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो।
(डा पुन शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक हुन्)स्वास्थ्य खबरपत्रिका
Prevस्ट्रोकको उपचारमा नौलो क्रान्ति
Nextअमृतीय गुण भएको फल बेल